Aragtida Wariyayaasha Soomaaliyeed & xeerka Saxaafadda ee dhaqangalka ah. – SOMA: Somali Media Association
Xeerka Saxaafadda ee dhaqangalka ah, waxaa jira in Wariyayaasha Soomaaliyeed qaarkood ay u arkaan qodobada ku jira kuwa u baahan fasiraad dheeri ah, sidoo kalana aan laga talagalin inta uu heerarka kala duwan soo marayey xeerkan.
Waxa ay Wariyayaasha aan la hadalnay oo kala joogo Afar magaalo ay soo jeedinayaan in loo baahan yahay qodobada qaar lagu sameeyo wax kabadel.
Waa kuwan wariyayaasha oo aragtidooda ka dhiibanaya, waxaana ay kala joogaan magaalooyinka Muqdisho, Baydhaba, Guriceel, & Baledweyn.
Waxaa codadkan soo duubay Maxamed-Qadar Cabdi (Radio Himilo), Muqdisho, Shukri Ismaaciil (Radio Warsan), Baydhaba, Maxamed Axmed (Radio Galgaduud), Guriceel, iyo Shukri Bariyare (Radio Hiiraanweyn) Baledweyn.
Halkaan hoose ka dhageyso codadka Wariyayaasha